Sababta keentay inuu Qarxo Baytariga Mobilka Samsung Galaxy Note 7 (Video) - Hablaha Media Network
Sababta keentay inuu Qarxo Baytariga Mobilka Samsung Galaxy Note 7 (Video)
HMN:- Shirkadda Samsung oo baaritaan ku samaysay sababta uu la kululaanayay ama la gubanayay taleefoonkeeda Galaxy Note 7 ayaa ogaatay in mushkiladdaasi ay ka imanaysay cilad gashay baytariga.
Shirkadda ayaa bishii October ee sanadkii hore joojisay iibinta taleefankeedan ka dib markii ciladdaas lagu arkay.
Isniintan ay shirkaddu sheegtay in ciladdaasi ay ku egtahay baytariga oo kali ah isla markaasna aysan la xiriirin qaybaha kale ee taleefoonka.
Waxaa loo malaynayaa in shirkaddu ay khasaartay 5.3 bilyan oo doolaar ka dib markii ay joojisay iibinta taleefakaas isla markaasna ay soo celisay kuwii ay iibisay, ka dib markii ay ka cawdeen macaamiishu, arrintaas ayaana dhaawacday sumcaddii shirkaddaas oo laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed.
Shirkadda ayaa ciladda Galaxy Note 7 ku faahfaahisay war qoraal ah oo ay soo saartay, waxyna Shirkaddu sheegtay in qaabayta taleefanka iyo labo warshadood oo taleefanadda lagu sameeyo ay kaalin ku lahaayeen ciladda baytariga gashay.